Cabbiraadda: Sida looga fogaado inuu noqonayo Dhibbanaha Dhibbanaanta
Maalmahan, dadku waxay isticmaalaan bogagga internetka ee warbaahinta bulshada, xarumaha dukaamada lagu iibiyo iyo goobaha khamaarka ee tiro badan. Maaha qalad in la sheego in internetka uu noqday ilo xogeed asaasi ah; waxaan ku dhufaneynaa boggag kala duwan oo aan akhrino maqaallo naga jecel si joogto ah. Laba sano ka hor, waxaa jiray saddex malyan oo keliya oo ah qaabab aad u xun, boqolaal cusub ayaa la helay maalin kasta.
Frank Abagnale, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijital, wuxuu cadeeyaa in caqabaddu ay noqotey mid khatar badan oo qotodheer ka badan sidii hore waxay kobcinaysaa walwal sharci ah oo la xiriirta aqoonsigeena shaqsiyadeed iyo shaqsiyadeed. Khatarta ah in infekshanku ku dhaco internetka ayaa ka sarreeya tan sababtoo ah dhammaan xogta ayaa dib loo isticmaali doonaa maalin kasta. Asalka astaamaha iyo fayrasyada lama yaqaan, laakiin waa suurtogal in la iska ilaaliyo.
Waa maxay xaasidnimada?
Xakameyntu waa nooca ugu caansan software-ka xaasidnimo; weeraryahannadu waxay isticmaalaan qalabkan si ay u carqaladeeyaan qalabka kombiyuutarka. Waxay soo aruuriyaan xog xasaasiyad leh iyo helitaanka nidaamkaaga iyada oo aan fasax laga haysan. Fayruska iyo Gooryaanka waa laba nooc oo kale oo aan lagu qasbin khayaanada. Dhammaan waxyaabahan ayaa sababa dhibaatooyin kala duwan waana in si kale loola dhaqmaa.
Fayrasku waa shey is isku mid ah oo ku faafaya kumbiyuutarkaada adoo isticmaalaya internetka wuxuuna qaadan karaa qaabka codsiyada iyo dukumentiyada. Daaqa, dhinaca kale, way ka duwan tahay fayraska..Gobolladu waxay ku faafiyaan shabakadaha kombiyuutarka la'aanteed macluumaadkaaga oo ay sababi karaan dhibaatooyin culus.
Maxay tahay ujeeddada ka dambeysa khayaanada?
faragalinta Trojan waxay ka caawisaa sameynta faylasha xogta nidaamka kombiyuutarka waxayna ku siinaysaa wax aad u badan. Sannado kahor, fayraska waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin shaashado iyo tijaabooyin internetka. Dadka intooda badan ma aysan ogeyn in fayruusyada iyo nadaafadda ay si xun u waxyeeleeyeen nidaamyadooda kombiyuutarka. Haatan xaaladdu way is bedeshay; maalmahaas, cybercriminals waxay isticmaalaan khayaanada si ay u kasbadaan internetka, dadkuna waxay yaqaanaan sida looga qaado tallaabooyinka iyaga ka soo horjeeda. Koxootiyaalku waxay horumariyaan shabakadaha waxayna abuuraan dakhli iyagoo muujinaya xayaysiinta. Waxay ku soo lifaaqaan fayrasyo ​​kala duwan iyo nacfaan u ah xayeysiisyada si ay u soo jiito dad badan iyo dad badan. Waxay ku dhejiyaan kombiyuutarka waxayna ururiyaan xogtaada shakhsi ahaaneed sida lambarka amniga bulshada, lambarrada kaararka deynta, iyo ID-yada PayPal.
Sideen ku heli karaa infekshanka khatarta ah?
Waa wax laga xumaado in aysan jirin hab gaar ah ama sax ah oo looga takhaluso nacas iyo fayras. Xitaa barnaamijka ugu sareeya iyo barnaamijka caanka ah ee antivirus iyo barnaamijyada xajinta leh ma bixiyaan ilaalin iyo badbaadin ku filan internetka. Sidaa darteed, waxaad isticmaali kartaa qalab antivirus oo keliya si aad u hesho digniin haddii uu jiro nooc khatar ah ama fayrus jooga oo ku jira nidaamka kombiyuutarkaaga.
Sidee looga fogaadaa in uu ku dhaco waxyaalahan xun?
Waa inaad haysatid casrigaaga ama antivirus anti-software-kaaga; waxaa muhiim ah in aad rakibtid qoraaladii ugu dambeeyay si aad uga fogaato inaad qaadsiiso. Waa inaad sidoo kale isticmaashaa oo aad sii wadataa barnaamijyada antivirus oo kala duwan iyo software-naceyb ah si aad ugu badbaado internetka. Waxaad rakibi kartaa kuraasta si aad u ilaaliso nidaamka kombiyuutarka ee ka socda taraafikada websaydhka ah iyo weerarada xun. Ku darida goobta-ogsoon sidoo kale waa fiican haddii aad isticmaalayso qalab mobile ama laptop; waa inaad hubisaa goobahaaga ammaanka, goobaha shabakadda, goobaha email-ka, iyo xisaabta internetka hal mar. Intii aad internetka ku jirtay, waa inaad isticmaashaa furaha ereyada adag iyo inaad isbeddesho toddobaad kasta. Ha ilaawin inaad kumbuyuutarka ka jarto Wi-Fi markaad internetka aanad ahayn. Raac dareenka amniga ee adag iyo qaadashada tallaabooyin ku habboon si loo yareeyo khatarta fayrasyada iyo dhibaatooyinka Source . Raac habdhaqanka amniga oo qaado tallaabooyin taxadar leh markaad isticmaaleysid email iyo bogaga internetka si loo yareeyo khatarta ah in tallaabooyinkaagu ay kicinayaan caabuq